“Family Chef Caprice” : hisy fifaninanana hainahandro ho an’ny fianakaviana | NewsMada
“Family Chef Caprice” : hisy fifaninanana hainahandro ho an’ny fianakaviana
Hanamarika sahady ny fetin’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao ny fifaninanana. Fantatra mantsy fa fotoana ihaonana sy iarahan’ny fianakaviana ireo, izay antony lehibe hanaovana ny fifaninanana “Family Chef Caprice”. Araka ny anarany, fifaninanana hainahandro, natao hanasongadinana ny talentan’ny mpianakavy izy ity.
Tsotra ny fitsipiky ny lalao: mila mandefa “recette” izay mifototra amin’ny fampiasana ireo vokatra Caprice, ao amin’ny pejy Facebook ny mpandray anjara, hatramin’ny 19 novambra izao. Hijery izay 5 maharesy lahatra azy amin’ireo ny mpitsara, mba hiatrika ny dingana famaranana. Aorian’izay, hasaina hanatontosa ny nahandrony manoloana ny “camera”, ka halefa ho hitan’ny rehetra ireo mpifaninana. Hanana anjara safidy 50% ny mpijery ny 8 hatramin’ny 14 desambra, ary an’ny mpitsara kosa ny 50% ambiny. Hampahafantarina ny 15 desambra izay mendrika indrindra.
“Afaka mandray anjara avokoa ny fianakaviana rehetra. Hahazo fahafahana miantsena mitentina 500.000 Ar izay mahazo ny loka voalohany, ankoatra ny loka homen’ny Caprice”, hoy ny nambaran-dRasaminana Vania, tompon’andraikitra ao amin’ny orinasa Star, nandritra ny fampahafantarana tamin’ny mpanao gazety omaly, tetsy Andraharo.